बिचौलियाको अन्त्य गर्ने अठोटले साढे ६ करोड लगानीमा तरकारी बजार - Pahilo News
श्यामसुन्दर बस्नेत, सञ्चालक भक्तपुर तरकारी बजार
काठमाडौंको कालीमाटीपछिको दोस्रो ठूलो तथा भक्तपुरमा पहिलो ठूलो तरकारी बजार सञ्चालनमा आउने भएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३, गठ्ठाघरको आठ रोपनी क्षेत्रफलमा कुल रू. ६ करोड ५० लाख लगानीमा शुरु हुन लागेको सो व्यवस्थित तरकारी बजारमा दुई रोपनी क्षेत्रफलमा पार्किङस मेतको व्यवस्था गरिएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–३, बालकोटमा आफ्नै कृषक बाबु श्यामबहादुर र आमाले अथक मेहनतले उब्जाएको एक मुठा फर्सीको मुन्टा बिचौलियाले रू. १० मा किनेर एक किलोमिटर पर गठ्ठाघरमा रू. ३० मा विक्री गरेको देखेपछि बिचौलियाको दलाली अन्त्य गर्ने अठोटका साथ तरकारी बजार निर्माण गर्न जुटेको संचालक ले बताए ।
गठ्ठारमा तरकारी बजार स्थापना गर्नुका कारण, अनुभव र भावि योजनाका बिषयमा पहिलो न्युजसग बस्नेतले गरेका कुराकानीको सार यस्तो छ ः
मेरो जन्म भक्तपुर बालकोटको किसान परिवारमा नै भएको हो । बुबाको सरकारी जागिर त्यहि पनि कार्यालय सहायक मात्रै हुनुहन्थ्यो । उहा बेलुकाको ड्युटि अफिसमा गरेर दिउसो तरकारी खेति गर्नुहुन्थ्यो । हामी ६ छोरा २ दिदिबहिनी सबै जनाले तरकारी खेति गरेर बानेश्वरमा लगेर बिक्री गथ्र्यौ । त्यतिबेला बोरा या डोकोमा तरकारी राखेर सबैभन्दा सस्तो भाडाको लागि ट्रलिबस या भक्तपुरको मिनिबस कुरेर बस्थ्यौ । एक जनाको कार्यालयको सरकारी जागिरले करिब डेढ दर्जन परिवार धान्न मुस्किल नै हुन्थ्यो । त्यसैले खेतबारी र गाइभैसी पनि पालिएको थियो । हाम्रो स्कुल ठिमिमा थियो हामी बालकोटमा बस्ने । खेतिपाति लगायतका कारणले गर्दा स्कुल जान ढिलो हुदा कहिलेकाहि ट्रलिबस पनि चढ्र्यौ । तर, पैसा नहुने त्यो बेलामा भाडा तिर्नुपर्छ भनेर स्टेशन आउनु भन्दा अगाडी गुड्दा गुड्दैको बसबाट हाम्फालेर भाग्थ्यौ । घरमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री गर्न पनि निक्कै कष्ट गर्नुपथ्र्यो । घरदेखि डोको या बोरामा भरेर बाक्दै बेच्न जानु पथ्र्यो । तर, केहि पछि तरकारीको व्यवसायीकरण शुरु भएपछि ब्यापारीहरु घर घरमा आएर तरकारी खरिद गर्न थाले । उनिहरुले कहिले रोपनीका रोपनी पनि उठाउथे । यसरी उनिहिरुले मिहिनेत गर्ने कृषकहरुलाई निक्कै कम दाम दिएर तरकारी खरिद गर्न थाले ।
उचित मुल्य नपाएको बुबाममीको गुनासो
मेरो ममी ७६ बर्षको हुनुहुन्छ भने बुबा ८७ बर्षको हुनुहुन्छ । अहिलेपनि ५ रोपनी जमिनमा तरकारी खेति गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको सधै एउटै गुनासो छ ‘हामी किसानले दुख गरेर उत्पादन गरेको तरकारी निक्कै सस्तो दिनुपर्छ । तर, बिचौलियाले त्यहि तरकारी निक्कै महंगो मुल्यमा बिक्री गर्छ ।’ आफैले बोकेर लान नसकिने भएको कारण पनि उनिहरुले भनेकै मुल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बजारमा ३० रुपैयाँ मुठामा बिक्री हुने तरकारी हामीले ७÷८ रुपैयाँ पाउन पनि गाह्रो छ । अझ तरकारी धेरै फलेको बेलामा त धेरै नै सस्तो या सित्तैमा पनि दिनुपर्ने अवस्था आउछ । सधै यस्तो भएपछि कसरी सहन सकिन्छ त ? भक्तपुर नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भएपनि यहाँ धेरे नै किसानहरु छन् । यहाँ धेरै उत्पादन हुने तरकारीको केहि बढि मुल्य पाउन कालिमाटि, चाबहिल, बानेश्वर या कोटेश्वर लानुपर्ने हुन्छ । भक्तपुरको तरकारी जिल्ला नकटाई मुल्य पाउन नै मुस्किल हुन्छ । एक दिन भक्तपुरको व्यपारिकले कालिमाटिमा काउली बचेको देखेको थिए । उसले व्यपारिलाई १३ रुपैया केजीमा बेचेको काउली करिब १ किलोमिटर वर ५० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको थियो । मिहिनेत गर्ने किसान भन्दा व्यापारीको कमाई अत्याधिक देखेर एक किसिमको आक्रोस पेनि पैदा भयो । भक्तपुरको तरकारी काठमाडौ गएर फेरी खुद्रा बिक्रीको लागि काठमाडौ नै आउने चक्रलाई हटाउन सकिएमा किसानले पनि उचित मुल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा ताजा तरकारी किन्न पाउछन् भन्ने भयो । त्यसपछि हरेक तरकारी बजारको निरिक्षण गर्न शुरु गरे ।
बजारमा भन्दा ४० प्रतिशत सस्तो
स्थानिय किसान, तरकारी बजारका सञ्चालकलगायका धेरैको सल्लाहमा गठ्ठाघरमा तरकारी बजार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हु । तर, परम्परागत मोडल भन्दा फरक ढंगले किसानको तरकारी बजारमा सिधै बिक्री गर्ने र बिक्रेताले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने छोटो माध्यम बनाउदा सफल भइन्छ भन्ने भयो । यसो गर्दा किसानले घर नजिकै उपयुक्त मुल्यमा तरकारी बिक्री गर्न पाउछन् । त्यस्तै बिचौलिया नभएको कारण सस्तो मुल्यमा उपभोक्ताले पनि ताजा तरकारी पाउछन् । तरकोरी संकलनको लागि भक्तपुरका पुराना १६ केन्द्रहरुमा तरकारी संकलन बजारका केन्द्र बनाउने तयारी छ । सोहि संकलन केन्द्रबाट हाम्रो बजारमा रहेको गाडीमा किसानहरुले तरकारी ल्याएर यहाँका व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्न पाउछन् । यसो गर्दा किसानहरुको प्रत्यक्ष पहुच व्यपारीहरुसग हुन्छ । उनिहरुले केहि बढी नै मुल्य पाउछन् । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा गठ्ठाघरको तरकारी बजारमा अन्य बजारभन्दा निक्कै सस्तो पाइन्छ । बजारमा ५० रुपैयाँमा पाउने गोलभेडा र काउली यहाँ ३० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । अधिकांश तरकारी बजार मुल्यभन्दा तरकारी बजारमा करिब ४० प्रतिशत सस्तो मुल्यमा उपभोक्ताले पाउछन ।
साढे ६ करोड लगानी
सस्तो मुल्यमा तरकारी बिक्री हुने थाहा पाएपछि अहिले तरकारीका बिचौलियाहरुलाई तनाव हुन थालेको छ । सोहि कारण किसानहरुलाई बिभिन्न उपाय अपनाएर भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, तरकारी बजारमा करिब ३० प्रतिशत सटर किसानहरु आफैले लिएका छन् । उनिहरुले यहाँबाट तरकारी बिक्री गर्दा आफूलाई पनि लाभ हुने थाहा पाइसकेका छन् । मैले तरकारी बजार खोल्ने थाहा पाएपछि बैंक तथा बित्तिय सस्थाले सहयोग नगरेपनि साथीहरुबाट धेरै सहयोग पाएको छु । तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने जमिन पनि करिब ४० बर्षदेखि तरकारी खेति गर्दै आएका किसानकै हो । उहाँले निक्कै सुलभ मुल्यमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ । यो बाहेक पनि आवश्यक अन्य पुर्वाधारहरु सहयोग गर्नुभएको छ । बजार सञ्चालनमा आएपछि भुक्तानी गर्ने सर्तमा लगानीको करिब आधा जति त उदारो नै छ । बजार निर्माण र आवश्यक २० वटा गाडी समेत गर्दा करिब साढे ६ करोड जति लगानी हुन्छ होला । तर, यहा शितभण्डारको पनि निक्कै आवश्यकता देखिएको छ । सञ्चालनको अन्तिम चरणमा आइपुगेपछि बैङ्कले लगानी गर्छु भन्ने देखि साझेदारी गर्छु भन्नेहरु पनि आएका छन् ।
गाग्री काँधमा बोकेर भक्तपुर देखि ठमेल
२ दशक भन्दा लामो समयदेखि म आफै पनि समाजको तल्लो बर्गको हक हितको लागि लड्दै आएको छु । सोहि कारण पनि किसान मजदुरहरुको पक्षमा सधै रहन्छु । उहाँहरुको श्रम पशिनाले सहि मुल्य पाओस् भनेर नै तरकारी बजार सञ्चालन गर्न लागेको हु । म आफै पनि किसानको छोरो । माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्दा भक्तपुर देखि ठमेलको पुष्प डेरीमा आफैले एउटा क्यान हातमा झुण्ड्याउने र गाग्री काँधमा हालेर आफैले दुध पु¥याउन जान्थे । तर, त्यहा पनि कहिले पानी हालेको रहेछ भनेर निक्कै कम पैसा दिन्थ्यो । त्यतिबेला स्कुल जादा शिक्षकले सिधै मलाई सजाय दिने गर्नुहुन्थ्यो । मलाई सधै तरकारी बारीमा काम गरिरहेको, दुध बेच्न हिडेको, गाईभैसी चराएको देखेर शिक्षकले होमवर्क ग¥यो÷गरेन पनि नसोधी सजाय दिनुहुन्थ्यो । धेरै पटक मैले होमवर्क गरेपनि सजाय पाएको छु । स्कुल पढ्दा कुनै दिन आफ्नो बारीमा तरकारी नभएको अवस्थामा अन्य छिमेकीहरुको तरकारी आफैले किनेर बजारमा बिक्री पनि गर्ने गर्थे । यसरी तरकारी बिक्री गरेर कमाएको पैसाले मैले घरमा दराज र खाट किनेको छु । मेरो पहिलो कमाईबाट खरिद भएको कारण त्यो सामानलाई अहिले पनि मैले सुरक्षित नै राखेको छु ।
माघ दोस्रो साता उद् घाटन
तरकारी बजारको उद्घाटन माघको दोस्रो साता गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्घाटन गर्न सबै सटर र स्टल बुकिङ भइसकेको छ । सञ्चालक, कृषक र व्यापारीहरु मिलेर तरकारी बजार सञ्चालन हुनेछ । यहाँ तरकारी, फलफुल मात्र नभएर किचेनमा आवश्यक सबै सामग्री उपलब्ध गराउने हाम्रो तयारी छ । डेरी, क्यान्टिन, माछा मासु, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरु पनि सुलभ मुल्यमा पाइनेछ ।
काठमाडौं । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का सर्जक दुर्घटनामा परे । तर, मदन भण्डारीले ल्याएको जबज यति शक्तिशाली सिद..